सधैँ जवान देखिन चाहनुहुन्छ ? खानुहोस् यस्ता खानेकुराहरु : – Sadhaiko Khabar
सधैँ जवान देखिन चाहनुहुन्छ ? खानुहोस् यस्ता खानेकुराहरु :
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण २२, २०७७ समय: १९:०७:५९
सुन्दर र आकर्षक देखिन हरकोहिको चाहना हुन्छ । अनुहारमा क्रीम लगाउँदैमा कोहि व्यक्ति राम्रो भएको महशुस गर्छन् । तर फरक र आकर्षक देखिनका लागी अन्य तरिकाहरु पनि अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।